Cinderella, iyo mavambo eshure kweiyo animated vhezheni yeDisney | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Type, Nhoroondo yezvinyorwa, Mabhuku, Literature, Nyaya
Muna 1950 Disney yakaunza vhezheni yayo yehupenyu yeCinderella kuchiratidziri.. Kune yake firimu akafuridzirwa neshanduro yemunyori wechiFrance Charles Perrault. Zvisinei, chii chinoshamisa, kana iwe ukaita imwe tsvakiridzo pamusoro penyaya yenyaya, ndizvo izvo Cinderella Inobva kuvaIjipita, zvirinani. Iyi ngano inowanzoitika mukondinendi yeEurasia. Sezvambocherechedzwa, Disney akasarudza iyo vhezheni ye Charles kutadza nekuda kwekusachena kwake pamusoro peiyo vhezheni yeGerman Grimm.
Kune veIjipita yaive nyaya yaRhodope, kana Rhodopis, kune vaRoma yaive ngano yemukadzi ane tsoka shoma, chinhu chinodzokororwa uye chengetwa mushanduro zhinji. Uye dzakawanda dzimwe tsika dzeEurasia dzakapfuura nhoroondo ye Cinderella shoko remuromo. Perrault uye hama dzakapenga ivo vakadhindwa mumabhuku enhau evana, saka idzi shanduro dzakava "dzepamutemo."
1 Perrault's Cinderella uye The Brothers Grimm's
1.1 Kutanga kumwe chete
1.2 Mhedzisiro dzakasiyana uye macabre akasiyana nekucheka
2 ChiGiriki cinderella
3 Nharo yakajairika uye inodzokorora
Cinderella wePerrault nehama Grimm
Kutanga kumwe chete
Misiyano iri pakati peshanduro mbiri idzi macabre. Munyaya dzose dziri mbiri, iye musikana anoitwa nherera naamai uye akasiirwa tsitsi dzemukadzi mutsva wababa vake nevanasikana vaanouya navo. Iwo mabiko anokandwa nemuchinda anotora mazuva matatu, saka iye anokomborerwa naamai vamwari kana neshiri iyo inotaura mukati memazuva matatu aya.
Mamiriro acho anogara akafanana, pakati pehusiku runako runopera. Husiku huviri hwekutanga anokwanisa kutiza, asi muchinda anoraira kuisa glue pamatanho, nenzira iyi shangu diki yaCinderella inogara pamatanho.
Mhedzisiro dzakasiyana uye macabre akasiyana nekucheka
Kana uchitsvaga muridzi weshangu diki uye uchisvika pamba paCinderella, chete ndivo vanin'ina vanobuda. Pano kupera kweFrance uye kupera kweDisney zvakafanana, asi iyo Grimm yekupedzisira iri kutanga kuita rima.
Kana tsoka yemwanasikana wekutanga isingapinde, amai vake vanomuudza kuti agure zvigunwe zvake, kumugutsa kuti kana ari mambokadzi haafanire kufamba. Muchinda anomuona aine bhutsu otanga kubuda mukomboni nemukadzi wake weramangwana, asi dzimwe njiva dzinomuudza kuti bhutsu haisi yake.
Achiona ropa pashangu, anodzoka osarudza kuedza imwe hanzvadzi. Zvakare shangu yegirazi yegirazi haikwane kutsoka yemwanasikana wechipiri, amai vanobva vamugombedzera kuti amuchekere chitsitsinho nechero chikonzero chakaita kuti wekutanga achekere minwe yake. Zvakare zvakare njiva dzinonyevera muchinda kuti uyu haasi iye musikana akakodzera futi.
Ipapo Cinderella anoonekwa, ane shangu inokwana zvakakwana. Vese amai vokurera uye vanin'ina vekukoka vanokokwa kumuchato, asi mamwe magunguwo anoburitsa maziso avo, achivasiya vari mapofu.
Chinhu chinonakidza kwazvo ndechekuti Cinderella inogara iri blonde nemaziso akasvibira uye ganda rakanaka. Izvi imhaka yekuti mune yechiGiriki shanduro Cinderella akauya kuEjipita semuranda. Murume anozvitenga akanaka chaizvo, asi vamwe vakadzi varipo vanomutsvinyira nekusiyana kwavo navo, zita remadunhurirwa rekuti Pink Cheeks. Haasi hanzvadzi dzinoita kuti hupenyu hunetseke kune chiGreek Cinderella, asi rangano yakazara yakafanana.
Nharo yakajairika uye inodzokorora
Cinderella inotiratidza kuti nharo yemusikana wechidiki akanaka, anoshungurudzwa uye akashatiswa ndeyekare seye munhu. Iroto regoridhe rekubva pahurombo hwakanyanyisa kuenda muumbozha uye kunyaradzwa nekurohwa kwakareruka kwerombo ratiperekedza kubva kunguva dzekare.
Disney aiziva zvayaiita nekushandura dzekare nyaya uye enganonyorwa kuva ehupenyu mafirimu. Idzo ngano dzakange dzatove dzakapinda mukurumbira ndangariro, ichivimbisa kuti vanogara vachirova pahwindo guru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Cinderella uye yake chaiyo mavambo